Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi oo Caawa ku geeriyooday dalka Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi oo Caawa ku geeriyooday dalka Kenya
Ardaan Yare 10 March 2021
Allaha u naxariistee waxaa isbitaal ku yaal magaalada Nairobi ku geeriyooday Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed.
Geerida Cali Mahdi ayaa waxaa xaqiijiyey xubno ka tirsan qoyskiisa oo ku sugan Magaalada Muqdisho.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Cali Mahdi uu maalmihii ugu dambeeyey ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho, arrimo caafimaadna uu u tagay magaalada Nairobi maalmo ka hor, halkaasoo uu caawa ku geeriyooday.
Cali Mahdi ayaa waxaa uu ahaa Odey Soomaaliyeed, waxaana uu kamid ahaa Ganacsatada Soomaaliyeed kuwoodii ugu waaweynaa.
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyey Geerida Xildhibaan Boonoow
Madaxweyne Farmaajo oo War kasoo saaray geerida Marxuum Cali Mahdi